Kungani imvula - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Funda ukusebenza ngemizuzu eyi-10>
Ikhwalithi ephezulu yesithombe nokunemba>
Iqinile futhi iphephile>
Ingahlanganiswa nezinhlobo eziningi zama-drones>
Umkhiqizi omkhulu wekhamera ye-oblique yaseChina
Yasungulwa ngo-2015, i-Rainpootech ibigxile ekuthwebuleni izithombe ezitshekile iminyaka engu-5+. Inkampani iqongelele inombolo enkulu yobuchwepheshe obuyisisekelo emikhakheni ye-optics, ukuzulazula okune-inertial, i-photogrammetry, kanye nokucubungula idatha yendawo. Amayunithi angaphezu kuka-2000 athengiswa ngonyaka, amabhizinisi angu-10K emhlabeni wonke athembela i-Rainpootech.
Eyokuqala ukwethula ikhamera etshekile enamalensi amahlanu ngaphakathi kwe-1000g(D2), bese kuba i-DG3(650g), bese kuba i-DG3mini(350g). I-Rainpoo isazama ukwenza imikhiqizo ibe lula, ibe mincane, isebenziseke ngezindlela eziningi, futhi kube lula ukuyisebenzisa.
Esikudingayo ukukudlula njalo THINA THINA, futhi NGEKE SISOZE SIYEKE.
Ikhamera eyodwa, amalensi amahlanu. Lokhu kuhlanganiswa kukuvumela ukuthi uqoqe izithombe kusuka emibonweni emihlanu endizeni eyodwa.Futhi i-Rainpoo iye yasungula isofthiwe eningi esekelayo ne-hardware, engakwazi nje ukulondoloza isikhathi sokusebenza kwendiza ye-UAV, kodwa futhi yonga isikhathi sedatha yokucubungula isofthiwe ye-3D. .
Bheka “Izesekeli” ukuze uthole ukuthi uzisebenzisa kanjani izisekeli ukonga isikhathi sakho >
Idizayini ye-modular yenza kube lula kunoma ubani ukuthi afunde ukufaka nokusebenzisa amakhamera. Isoftware ehlakaniphile ikuvumela ukuthi ulande izithombe ngokuchofoza okukodwa.
Ilensi yokubona eyenziwe ngokuzimela. I-Double Gauβ eyakhelwe ngaphakathi kanye nokuhlakazeka okuphansi okwengeziwe kwelensi ye-aspherical, enganxephezela ukuphuma okungahambi kahle, ikhulise ukucijile, inciphise ukuhlakazeka futhi ilawule ngokuqinile izinga lokuhlanekezela ngaphansi kuka-0.4%. Ngaphezu kwalokho, Samukele ubude bokugxila obuhlukile futhi saklama ivelu yobude obugxile kwesayensi yekhamera etshekile enamalensi amahlanu.
Funda kabanzi mayelana nekhwalithi yesithombe nokunemba >
Kungani ukuvumelanisa amalensi amahlanu kubaluleke kangaka?Sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sokundiza kwe-drone, isignali yokuqalisa izonikezwa kumalensi amahlanu ekhamera ye-obique. Ngokombono, amalensi amahlanu kufanele adalulwe ngesikhathi esifanayo, bese idatha ye-POS izorekhodwa ngesikhathi esisodwa. Ilensi ingaxazulula, iminyanise, futhi igcine, kanye nesikhathi esengeziwe esisithathayo ukuqedela ukurekhoda. Uma isikhawu phakathi kwamasignali e-trigger sisifishane kunesikhathi esidingekayo ukuze ilensi iqedele ukurekhoda, ikhamera ngeke ikwazi ukwenza ukuchayeka, okuzophumela "ekulahlekeni kwesithombe" .BTW,ukuvumelanisa nakho kubaluleke kakhulu. yesignali ye-PPK.
Funda kabanzi mayelana nokuchayeka kokuvumelanisa >
Igobolondo elenziwe nge-magnesium-aluminium alloy lisetshenziselwa ukuvikela amalensi abalulekile, futhi ngenxa yokuthi ikhamera ngokwayo ilula kakhulu futhi incane, ngeke ibangele noma yimuphi umthwalo owengeziwe ku-drone ephethe. Futhi ngenxa yedizayini yayo eyimojuli (umzimba wekhamera, iyunithi yokudlulisela kanye neyunithi yokulawula kuhlukanisiwe), kulula ukuyishintsha noma ukuyinakekela.
Kungakhathaliseki ukuthi i-UAV enama-rotor amaningi, i-drone yamaphiko eqinile, noma i-VTOL, amakhamera ethu angahlanganiswa nawo futhi afakwe ngokuvumelana nezinhlelo zokusebenza ezahlukene.